Kukurukura Mumhuri: Zvamungaita Pakukurukura Matambudziko
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luganda Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Marathi Mongolian Mutauro Wemasaini wokuAmerica Myanmar Nepali Norwegian Oromo Pangasinan Polish Portuguese (Brazil) Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
MAZANO OKUBATSIRA MHURI | VAKAROORANA
Iwe nemumwe wako pamunenge muchikurukura dambudziko rinenge riripo, unoona here sekuti panozopera nyaya yacho unenge watowedzera kugumbuka? Kana zviri izvo zvinoitika, pane zvaunokwanisa kuita kuti uderedze dambudziko iroro. Asi, chaunofanira kuzivawo ndechokuti maitiro evanhurume nevanhukadzi pakukurukura anosiyana. *
Vanhukadzi vanowanzofarira kubudisa zviri pamwoyo vasati vaudzwa kuti dambudziko racho ringagadziriswa sei. Dzimwe nguva chavanenge vachingoda kungoteererwa.
“Ndinonzwa kurerukirwa pandinotaura zvinenge zvichindinetsa kumurume wangu uye pandinoona kuti ari kundinzwisisa. Pandinongopedza kutaura nyaya yacho zvinobva zvatoperawo.”—Sirppa. *
“Kana ndisati ndaudza murume wangu zvinenge zviri mumwoyo mangu, nyaya yacho inoramba ichingondinetsa. Pandinozomuudza ndinobva ndanzwa kurerukirwa.”—Ae-Jin.
“Ndinoita sezvinoitwa nemapurisa. Pandinenge ndichitaura, ndinenge ndichiongorora kuti chii chingava chakonzera dambudziko racho.”—Lurdes.
Varume chavanowanzofunga, kugadzirisa dambudziko. Zvinonzwisisika nekuti murume paanogadzirisa dambudziko anobva anyatsonzwa kuti ndiko kunonzi kuva murume. Paanopa mazano, anenge achida kuti mudzimai wake avimbe naye pakugadzirisa matambudziko. Saka varume vanonetseka kana zvavanenge vataura zvikasagamuchirwa. Mumwe murume anonzi Kirk anoti, “Ndinoshaya chawandiudzira dambudziko rako iwe usingadi kubatsirwa kurigadzirisa!”
Bhuku rinonzi The Seven Principles for Making Marriage Work rinonyevera kuti, “Unofanira kutanga wanzwisisa usati wapa munhu mazano.” Rinotiwo, “Tanga waratidza mumwe wako kuti uri kunyatsomunzwisisa. Kakawanda kacho mumwe wako chaanenge achida kuteererwa chete, kwete kuudzwa mazano ekupedza dambudziko.”
Kana uri murume: Dzidzira kunyatsoteerera wotora dambudziko racho kuriita rako. Mumwe murume anonzi Tomás anoti: “Pandinenge ndapedza kuteerera zvaanenge achitaura, dzimwe nguva nechomumwoyo ndinenge ndichiti, ‘Asi hapana chatagadzirisa.’ Kakawanda kacho mudzimai wangu ndizvo zvaanenge achingoda, kuteererwa chete.” Mumwe murume anonzi Stephen anobvumiranawo nazvo. Anoti, “Ndinoona zvichishanda kupa mudzimai wangu nguva yokuti ataure zviri pamwoyo pake ndisingamudimbudziri. Kakawanda kacho paanozopedza kutaura anobva andiudza kuti ava kunzwa kurerukirwa.”
Edza izvi: Nguva inotevera pamuchakurukura rimwe dambudziko nemudzimai wako, usamhanyira kumuudza zvokuita usina kukumbirwa. Paanenge achitaura newe, mutarise wobva wanyatsomuteerera. Gutsurira kuti uratidze kuti muri kubvumirana. Dzokorora muchidimbu zvaari kuedza kureva kuti uratidze kuti wanyatsonzwisisa zvaataura. “Dzimwe nguva mudzimai wangu anenge achingoda kuziva kuti ndiri kumunzwisisa uye kuti ndiri kudivi rake,” anodaro murume anonzi Charles.—Zvinotaurwa neBhaibheri: Jakobho 1:19.
Kana uri mudzimai: Udza murume wako zvaunoda kuti aite. Mumwe mukadzi anonzi Eleni anoti, “Tinogona kufunga kuti varume vanoziva kuti zvii zvatinoda, asi dzimwe nguva tinotofanira kuvaudza.” Mumwe mukadzi anonzi Ynez anoti: “Ndinogona kuti, ‘Pane chinhu chiri kundinetsa chandinoda kukuudza. Handisi hangu kutsvaka mazano, asi chandinoda ndechokuti ungonditeererawo ndichikuudza zviri mumwoyo mangu.’”
Edza izvi: Kana murume wako akamhanyira kukuudza magadzirisiro aungaita dambudziko, usabva wafunga kuti haana hanya nezvauri kutaura. Zvimwe ari kuedza kutokurerutsira. Mumwe mukadzi anonzi Ester anoti, “Panzvimbo pokuti ndigumbuke, ndinoziva kuti murume wangu anondida uye anoda kunditeerera ndichitaura, asi kungoti anenge achidawo kundibatsira.”—Zvinotaurwa neBhaibheri: VaRoma 12:10.
Mose muri vaviri: Tinowanzoitira vamwe zvatinoda kuti vatiitirewo. Asi kuti mukurukure zvakanaka matambudziko amunosangana nawo, unofanira kufunga kuti ndezvipi zvinodiwa nemumwe wako. (1 VaKorinde 10:24) Mumwe murume anonzi Miguel anoti: “Kana uri murume unofanira kudzidza kuteerera. Kana uri mukadzi, unofanira kupota uchibvumawo mazano omurume wako. Kana mose mukabvumawo zvinodiwa nemumwe, zvinhu zvichakufambirai zvakanaka.”—Zvinotaurwa neBhaibheri: 1 Petro 3:8.
^ ndima 4 Zvinhu zvinoitwa nevarume kana kuti nemadzimai zvichataurwa munyaya ino hazvirevi kuti ndizvo zvinoitwa nevarume nevakadzi vose. Asi mazano arimo anogona kubatsira munhu wese akaroora kana kuroorwa, kuti anzwisise mumwe wake pavanenge vachikurukura.
^ ndima 7 Mazita ari munyaya ino akachinjwa.
‘Kurumidza kunzwa, unonoke kutaura.’—Jakobho 1:19.
“Pakukudzana, tungamiriranai.”—VaRoma 12:10.
“Ivai nokufunga kwakafanana, muchinzwirana ngoni.”—1 Petro 3:8.
NDEIPI NGUVA YAKANAKA?
Bhaibheri rinoti: “Shoko rinotaurwa panguva yakakodzera, haiwa rakanaka sei!” (Zvirevo 15:23) Asiwo kana tikataura panguva isiriyo, hapana chakanaka chinobuda.
“Kana nyaya ikataurwa panguva isina kukodzera, panotoita makakatanwa.”—Sirppa.
“Kana munhu aine nzara uye akaneta haisiriyo nguva yokutaura zvinhu zvinoda kudzamisa pfungwa.”—Julia.
“Rimwe zuva murume wangu achingosvika pamba, ndakabva ndatanga kutaura ndakatsamwa zvinhu zvainge zvichindinetsa. Ndava pakati pokutaura ndakabva ndanyarara, ndaona kuti ndingatonyaudza mumwe wangu! Ndakamuudza kuti tichazotaura kana tapedza kudya. Akanditenda, zvokuti patakazotaura nyaya yacho, tose takanga takadzikama uye tainzwisisana.”—Lurdes.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Zvamungaita Pakukurukura Matambudziko
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku MUKAI! Kukunda Dambudziko Rekusiyana Kwemitauro
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe MUKAI! Kukunda Dambudziko Rekusiyana Kwemitauro
Kukunda Dambudziko Rekusiyana Kwemitauro
MUKAI! Kukunda Dambudziko Rekusiyana Kwemitauro